टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियूक्त चौधरीले लिए सपथ - Sindhuli Saugat
टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियूक्त चौधरीले लिए सपथ
टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीले प्रतिनिधी सभा सदस्यको पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । चौधरीले थारु भाषामा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन् ।
आज अभियूक्त चौधरीलाई सभामुख सभामुख कृष्णबहादुर महराले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन । चौधरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को तर्फबाट निर्वाचित भएका सांसद हुन् ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको निर्मम हत्या काण्डका मुख्य अभियुक्तका रुपमा रहेका चौधरीले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिँदै आफु निर्दाेष भएको कुरा जनमतले पुस्टि गरेको बताएका छन् ।
चौधरीले सपथ खुवाएपछि सांसदलाई जेल पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनी प्रश्न गरेका छन् । ‘‘यो लोगो सांसदको लोगो हो । एकजना सांसदलाई सपथ खुवाएर कारागारमा पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?’’ उनले भने ‘‘यो लोगोको सम्मान के हो ? यो लोगो हामी सम्पूर्ण प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा सहभागी हुने सदस्यको कत्तिको इज्जत राख्छ राज्यले बोल्ला, संसदले बोल्ला ।’’
आफू माला र खादा लगाएर फेरि जेल जानुपर्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे ।‘ ‘मैले लगाएको लोगोको प्रतिष्ठा कति रहन्छ कति रहन्न ?’’
नेपाली कानूनमा कुनै पनि व्यक्तिलाई साढे ३ वर्षसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न नपाइने भए पनि आफूहरु जेलमा बसिरहेको भन्दै चौधरीले यो मुद्दा छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउन आग्रह गरे । आफूले द्वन्द्व नचाहेको भन्दै उनले जनताले न्याय नपाएसम्म समृद्धि नआउने बताए । ‘शान्ति नभई समृद्धि बन्न सक्दैन । समृद्धि बनाउन जनतालाई न्याय दिनुपर्छ’ उनले भने ।
प्रवासमा पकौडा खाएर बस्नुभन्दा आफ्नै देशको दालभात तरकारी मन परेर जेल बस्न आएको उनले बताए । ‘मलाइ मेरै देशको दालभात तरकारी मन प यो र जेलमा बन्द भएँ । जेलमा पनि सर्वसाधारण कैदीको जीवनयापन गरिरहेको छ’ उनले भने ।
टीकापुर घटनामा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक दुधे बालकको हत्या भएको थियो ।
चौधरी फरार रहेकै बेला निर्वाचन लडेका थिए । उनलाई सपथपछि पुनः उनलाई डिल्लीबजार कारागार लगिएको छ ।
पछिल्लाे - रेशम चौधरीको सपथ दिउँसो ३ बजे
अघिल्लाे - अनौठो विवाह ! बेहुलि बुलेटमा, जन्ती लिएर पुगिन् बेहुलाको घर (भिडियो सहित)